ပြည်ပရောက်မြန်မာများ ကြိုတင်မဲပေးခြင်း အဆင့်ဆင့် (Credit and Reference – Myanmar Election Review) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ပြည်ပရောက်မြန်မာများ ကြိုတင်မဲပေးခြင်း အဆင့်ဆင့် (Credit and Reference – Myanmar Election Review)
ပြည်ပရောက်မြန်မာများ ကြိုတင်မဲပေးခြင်း အဆင့်ဆင့် (Credit and Reference – Myanmar Election Review)
(၁) ပြည်ပမှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနက်ဘယ်သူတွေ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရှိသလဲ။
•• ပြည်ပရောက် သံအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ အိမ်ထောင်စုဝင်များ။
•• ပြည်ပရောက် သံရုံးအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ အိမ်ထောင်စုဝင်များ။
•• ပြည်ပရောက် ပညာတော်သင်များ နှင့် ၎င်းတို၏ အိမ်ထောင်စုဝင်များ။
•• ပြည်ပရောက် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၎င်းတို၏ အိမ်ထောင်စုဝင်များ။
•• အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေသူများနှင့် အိမ်ထောင်စုဝင်များ
နောက်ဆုံးအချက်က နိုင်ငံခြားမှာ တရားဝင်နေထိုင် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ကျနော်/ကျမတို့လို မဲပေးခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသား များကိုဆိုလိုပါတယ်။
(၂) ပြည်ပသို့တရားဝင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရစေရန်။
•• အရေးအကြီးဆုံး နဲ့ အခုလက်ရှိလုပ်ရမှာက မဲပေးခွင့်ရှိသူအမည်စာရင်းမှာ မိမိနာမည်ပါအောင်လုပ်ရပါမယ်။
တနည်းက မိမိရဲ့အိမ်ထောင်စုဇယား တည်ရှိရာ ရပ်ကွက်/ မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဲစားရင်းမှာ မိမိအမည်ပါမပါ အချက်အလက်မှန်မမှန် စစ်ဆေးရတာပါ။
နောက်တနည်းက online ကတဆင့် http://checkvoterlist.eucmyanmar.org/မှာ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Data base ရဲ့ အချက်အလက် ထည့်သွင်းမှု ပြီးမြောက်တဲ့ အဆင့်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
•• တကယ်လို့ သွားရောက်စစ်ဆေးပြီးလို့ မိမိအမည်ဟာ ကြေငြာထားတဲ့ အမည်စာရင်းမှာ မပါတာသေချာရင် မိမိအမည်ကို ထည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုလွှာ ပုံစံ (၃) ဖြင့်၎င်း။
•• အချက်အလက်မှားယွင်းနေပါက ပြင်ဆင်ရန် ပြင်ဆင်လွှာ ပုံစ (၄) ဖြင့်၎င်း လျှောက်ထားရပါမယ်။
•• မြို့နယ်တခုထက်ပိုပြီး အခြားမြို့နယ်မှာ မိမိ အမည်စာရင်းပါနေရင် ပိုနေတဲ့မြို့နယ်မှာပယ်ဖျက်ဖို့ ပုံစံ (၄-က) နဲ့ ပယ်ဖျက်ဖို့လျှောက်ထားရပါမယ်။
ဒါတွေ သေချာအောင် လုပ်ပြီးရင် ရှေ့ဆက်ဖို့ ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပမည့်နေ့ရက် ကြေငြာတာကို စောင့်မျှော်နေယုံပါ။
(၃) ပြည်ပသို့တရားဝင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရစေရန်။
•• မိမိနာမည်မှန်ကန်စွာ မဲပေးခွင့်ရသူစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လုပ်ထားပြီးပြီ ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရက် ကြေငြာတာကို စောင့်နေယုံပါ။
•• ရွေးကော်က ကြေငြာချက်ထွက်ပြီးပြီးချင်း ပုံစံ (၁၅) ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌါန သို့ ပေးပို့ရပါမယ်။ ပုံစံ ၁၅ ကို ဒီမှာ http://d.pr/f/11I13လည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
•• နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌါနက သက်ဆိုင်ရာ သံရုံး၊ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ရုံး အသီးသီးသို့ ပုံစံ (၁၅) ကို ဖြန့်ဝေပေးပို့ရပါမယ်။
•• ၎င်းသံရုံးတွေကတဆင့် အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ပရောက် မဲပေးခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများထံ ဖြန့်ဖြူးပြီး အရောက်ပြန်လည်ပေးပို့ရမည့် နေ့ရက်ကိုပါ တပါတည်း အသိပေးရပါမယ်။
•• ပြည်ပရောက်ကြိုတင်မဲပေးမည့်သူများမှ ၎င်း ပုံစံ (၁၅) ကိုဖြည့်စွက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာသံရုံးသို့ သတ်မှတ်ရက်အရောက် ပြန်လည်ပေးပို့ရပါမယ်။
•• သံရုံးမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌါနမှတဆင့် ဖြည့်သွင်းပြီး ပုံစံ (၁၅) ကို ရွေးကော်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရပါမယ်။
•• ရွေးကော်မှ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် မြို့နယ်ရုံးများသို့ ပြန်လည်စီစစ်ရန်ပေးပို့ပါမယ်။
ဤအဆင့်ပြီးရင် ပြည်ပရောက်ကြိုတင်မဲပေးမည့်သူများ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း ကြေငြာတာကို စောင့်နေယုံပါ။
(၄) ပြည်ပသို့တရားဝင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရစေရန်။
•• ရွေးကော်က ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း ကြေငြာပြီးတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးခွဲများမှ စီစစ်ပြီး ပြည်ပရောက် ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရှိသူများရဲ့ မဲလက်မှတ်များကို ရွေးကော်သို့ ပို့ပေးရပါမယ်။
•• ရွေးကော်မှ ၎င်း ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် များကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌါနမှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးများသို့ ပေးပို့ရပါမယ်။
•• သံရုံးအသီးသီးမှ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရှိသူများ လျို့ဝှက်စွာ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရပါမယ်။
•• ကြိုတင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ၏ နောက်ကြောတွင် ကော်မရှင်အဖွဲခွဲ၏ တဆိပ်တုံး နှင့် တာဝန်ခံထုတ်ပေးသူလက်မှတ် ပါရပါမယ်။
•• မဲလက်မှတ်နှင့်အတူ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံအမည် နှင့် မဲရုံအမှတ်တို့ တပါတည်း ပါဝင်ရပါမယ်။
•• သံရုံးမှ ဆန္ဒပေးပြီးမဲလက်မှတ်ပါ စာအိပ်များကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌါနမှတဆင့် ရွေးကော်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရမယ်။
•• ရွေးကော်မှ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲများပါစာအိပ်ကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ထပ်ဆင့်ပေးပို့ရပါမယ်။
Credit to မဲစာရင်းသွားကြည့်စို့ – Let’s Check Voter List
ပုံစံ (၁၅) Form က ဒီ မှာပါ.။
ပြည်တွင်းနေ ပြည်သူများ မဲစာရင်း စစ်ဖို့နဲ့ မဲပေးဖို့ အဆင့်ဆင့်ကို ဒီ Flow Chart မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပ မဲ ပေးပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းပြထားတဲ့ Flow Chart ပါ။
ကျနော်တို့ စလုံး သံရုံးမှာတော့ ကြိုတင်မဲပေးဖို့ လျှောက်လွှာအရင် တင်ရပါသေးတယ်။
စလုံး က သူများ သိလိုသည်များကို ဒီ ပေ့ချ တွင်သွားရောက် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
တခြားနိုင်ငံများအနေနဲ့တော့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံက မြန်မာသံရုံးတွေမှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
အမှန်တော့ အခု မဲပေးဖို့ အားစိုက်လုပ်နေတဲ့သူတွေက ဘယ်ပါတီ မဲပေးချင်လို့ဆိုတာ ထင်ရှားနေပြီးးး
မဲခိုးဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ ပါတီဘက်က လူများကတော့ အေးဆေးထိုင်နေရုံပါပဲ။
ဆိုတော့ ညစ်ရမှာ သူတို့ တာဝန်အဖြစ်လုပ်နေတာမို့
ကိုယ့်မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးအောင်လုပ်ရမှာ က ကျနော်တို့ တာဝန်ပါ။
ခိုးမှာသေချာတဲ့သူတွေကို ခိုးမှာပဲဆိုပြီး ထိုင်ကြည့်နေလို့ မရတာမို့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးထဲက တစ်ခုအဖြစ် မဲပေးခွင့်လေးကို အားစိုက်လိုက်ရအောင်ပါနော်။
(၁) ပယ်မဲတွေ ဖြစ်အောင်……
(၂) NLD ကိုသေချာပေါက်မဲပေးမယ့်သူတွေ မပါအောင်….
(၃) သေဆုုံးသူတွေ ထည့်ထားပြီး မဲစာရင်းရှုပ်ထွေးအောင်….
(၄) ဖွတ်တွေကိုုသေချာပေါက်မဲပေးမယ့် သူတွေသာစာရင်းထဲပါအောင်….
(၅) အချက်အလက်တွေမှန်ကန်ပြီး မဲပေးနိုုင်သူတွေအားလုုံး….မဲစာရင်းထဲမှာနည်းနည်းပဲ ပါအောင်….
မြို့နယ်တိုုင်း ရပ်ကွက်တိုုင်းမှာ သေချာ စီမံပြီး လုုပ်ထားကြ တာကတော့ ထင်ရှားနေပါပြီ…
ဒီတော့ ကျွန်တော်တိုု့ ဘက်က ဘာလုုပ်သင့်သလည်း ဆိုုတော့….
(၁) မဲစာရင်းထဲမှာ ပါမပါသွားကြည့်ပြီး ..မပါရင်ပါအောင်…အချိန်မှီ သူတိုု့ ပြဌာန်းထားတဲ့လုုပ်ထုုံးလုုပ်နည်း အတိုုင်းလုုပ်…
(၂) စာရင်းထဲပါပြီး အချက်အလက်မှားနေသူတွေ ကလည်း…အချိန်မှီပြန်ပြင်…
(၃) သေသူတွေ ပါနေတာကိုုလည်း…အချိန်မှီပြန်ထုုတ်….
– နောက်ဆုုံး final မဲစာရင်း အမှန်ပြန်ပြင်ပြီးသားထုုတ် တဲ့ အခါ….. ကိုုယ့်မြို့နယ် က ထုုတ်တဲ့ အဲ့ဒီ့ မဲစာရင်းကိုု မှတ်သား…. အတည်ပြု…..
– မဲပေးကြတဲ့ အခါ…. စာရင်းထက် ကျော်လွန်နေတဲ့ မဲ အရေအတွက်တွေ ဖြစ်မလာအောင် မဲရုုံ တွေမှာ အများရှေ့မှာပဲ ချက်ချင်း ထုုတ်ပြန်ခိုုင်း….
– မဲ ပေးနိုုင်တဲ့ သူအားလုုံးရဲ့ မဲပေးမှု အတိုုင်း မဲ အရေ အတွက်ဖြစ်စေရအောင်…ဝိုုင်းထိမ်းနိုုင်အောင်လုုပ်ရင်…
– နောက်ဆုုံးရလာဒ် မဲ အရေ အတွက်မှာတင်… NLD ကိုု ပဲ ပေးတဲ့ မဲ အရည်အတွက်က များနေရင်…. အဲ့ မဲ ရုုံကိုု…ဒီမဲရုုံမှာ NLD နိုုင်ကြောင်း… ချက်ချင်းကြေငြာခိုုင်း….
– မီဒီယာတွေကလည်း အရေးကြီးတဲ့မဲ ရုုံတိုုင်း မှာ ရောက်နေပြီး….သတင်းထုုတ်ပြန်…
– နိုုင်ငံအနှံ့ မှာ ရှိတဲ့ ကျေးရွာ ရပ်ကွက် မြို့နယ်က NLD နဲ့ပြည်သူတွေ အားလုုံး… အဲ့လိုု နည်းလမ်းနဲ့ ကြပ်မတ် ဝိုုင်းရံလိုုက်ရင်……
အခုုမဲ စာရင်းတွေ ကိုု ဘယ်လောက်ညစ်ညစ်…. ရလာဒ်က ပြည်သူ့ ပါတီ ကိုု မဲ ပေးတဲ့ ရာခိုုင်နှုံး များဘိုု့ ပဲ မလား….
တခြား သူတိုု့ ထပ်ညစ်နိုုင်သေးတဲ့နည်းလမ်းတွေ ကတော့….
– ကြိုတင်မဲ …နောက်ကျမဲ တွေ ကိုု လုုံးဝ(လုုံးဝ) လုုပ်မလာအောင်….. နောက်ဆုုံးထုုတ်ပြန်တဲ့ မဲပေးနိုုင်သူစာရင်းအမှန်ကိုုပဲ ကိုုယ့်လက်ထဲ ကိုုင်ထားနိုုင်ဘိုု့နဲ့…
– မဲ စာရင်းအရ ရပ်ကွက်ထဲမှာ တစ်အိမ်တက်ဆင်း ခန့်မှန်းမဲစာရင်းကိုု ကြိုကောက်နိုုင်အောင်…
– သက်ဆိုုင်ရာ NLD ရုုံးတွေနဲ့ တက်ကြွတဲ့ အမေ့ကိုု ထောက်ခံအားပေးတဲ့ ပြည်သူတွေ ဝိုုင်းဝန်း ကြရင်….
(ဆင်းရဲတဲ့ သူတွေက ဖွတ်တွေဆီက မတတ်သာ လိုု့ ပိုုက်ဆံယူထားယူတောင်…. ကိုုယ့်စိတ်ထဲက NLD ကိုုပဲ မဲ ပေးချင်တယ်ဆိုုရင်… ကိုုယ့်ဘာသာ တိတ်တိတ်ကလေး မဲပေးနိုုင်တာပဲဗျာ…ဘယ်သူ သိတာမှတ်လိုု့….နော)
ဘယ်လိုု အနှောက်အယှက်တွေ ရှိရှိပေါ့လေ…..
ကိုုယ့်ခေါင်းပေါ်က တောက်နေတဲ့ မီးတောက်ကြီးကိုု ငြိမ်းအောင် ညှိမ်းကြရတာမလား…
အဲ့ လောက်မှ အားမစိုုက်ရင်…တကုိုယ်လုုံးလောင်တော့မှာ…။
မဲစာရင်းတွေ စစ်ကြ မဲစာရင်းတွေ စစ်ကြနဲ့ လှုံ့ဆော်နေတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဲစာရင်း စစ်တယ်ဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲကြီးရဲ့ အင်မတန် သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းဆိုတာ သိဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကြီး တစ်ခုလုံး တရားမျှတဖို့ အပိုင်းကြီး သုံးပိုင်း ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
၁- မဲဆန္ဒရှင်တွေ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရရှိမှု Voters’ rights
၂- ကိုယ်စာလှယ်တော်တွေနဲ့ ပါတီတွေ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ညီတူမျှတူ ရရှိမှု Candidates’ and Party rights
၃- ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်စ်ခုလုံး တရားမျှတမှု Election process
၁- မဲဆန္ဒရှင်တို့ အခွင့်အရေးတွေမှာ ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရှိသူတိုင်း မဲစာရင်းမှာ ပါဖို့၊ မဲဆန္ဒရှင်တွေက ပါတီတွေအကြောင်း လွတ်လပ်စွာ စုံစမ်းမေးမြန်း ဆွေးနွေးခွင့် ရှိဖို့၊ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ပါတီတခုခုကဖြစ်ဖြစ်၊ ကော်မရှင်ကဖြစ်ဖြစ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း မရှိဖို့၊ လူနည်းစု လူမျိုးစုတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့် ရှိဖို့၊ မဲဆန္ဒရှင်တိုင်း မိမိတို့ မဲအရေးကြီးပုံကို သိရှိကြဖို့ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
၂- ပါတီ နဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အခွင့်အရေးမှာ ပါတီတိုင်း ညီတူမျှတူ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့် ရှိဖို့၊ လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ အနှောက်အယှက်ကင်းကင်း လုပ်ခွင့်ရဖို့၊ ပါတီတခုခုဟာ အစိုးရငွေကြေး၊ လူအင်အားတွေကို ပါတီစည်းရုံးရေးအတွက် မဆောင်ရွက်စေဖို့ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
၃- ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ကျယ်ဝန်းလှပါတယ်။ အင်မတန် အရေးကြီးတာတွေ ရွေးပြောရရင် မဲစာရင်း ပြည့်စုံရပါမယ်။
စာမတတ်သူတွေအတွက်လည်း သိသာလွယ်ကူသော မဲပြားဖြစ်ရပါမယ်။ မဲပေးပုံ ရိုးရှင်း နားလည်လွယ်ရပါမယ်။
မဲပေးဖို့ သွားသူတွေကို လုံခြုံရေး စီမံပေးရပါမယ်။ မဲပုံးတွေကို လုံခြုံစေဖို့၊ ခိုးမဲတွေ မရောက်ဖို့ စီစဉ်ရပါမယ်။
ကော်မရှင်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ဘယ်ပါတီနဲ့မှ မပတ်သက်တဲ့ သီးခြားဘော်ဒီဖြစ်ရပါမယ်။
နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့်သူတွေ၊ သီးခြားအဖွဲ့အစည်းတွေ စောင့်ကြည့်ခွင့် ရှိရပါမယ်။ မီဒီယာကဖြစ်ဖြစ်၊ လူထုကဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပလိန်းတက်လာရင် ကော်မရှင်က လျှင်လျှင်မြန်မြန် ဖြေရှင်းနိုင်ရပါမယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီတခုနဲ့တခု စွပ်စွဲကြတာ ထုံးစံပါ။
ဒါပေမယ့် အဓိကကျတာ မီဒီယာပါ။
မီဒီယာဟာ ရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့ watchdog ပါ။
အခုအထိ ပြည်သူကို အသိပညာမပေးပဲ ပြည်သူဆီက ပြန်မေးနေတာတော့ မဟုတ်လှသေးဘူးထင်ပါတယ်။
မေသင်္ကြန်ဟိန် မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။
(၁)မဲစာရင်းအမှားတွေကို အမှန်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ဖို့ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်အရှိဆုံးလို့ မြင်မိပါသလဲ?
မဲစာရင်းအမှားတွေ အမှန်ဖြစ်အောင် ပြင်ဖို့ထက် အစကတည်းက မမှားအောင် လုပ်ဖို့ တာဝန်ရှိခဲ့တာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းပါ။ ကျန်သော မီဒီယာ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေ အပါအဝင် ပြည်သူတရပ်လုံးက တာဝန်ယူရမှာပါ။
(၂)မှားနေတဲ့ မဲစာရင်းအမှားတွေကို လာမဲ့ နိုဝင်ဘာလ အမီပြင်နိုင်ပါ့လို့ ထင်ပါသလား?
ဟိုတနေ့က မန္တလေးတိုင်းမှာ လူ ၃၆သိန်းစာရင်း၊ လာစစ်သူ သုံးသိန်း၊ မှားသူ ၂သောင်း ခုနစ်ထောင် ဆိုလား ကြားလိုက်ပါတယ်။ မှားတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၈%လောက်ရှိပါတယ်။ ရိုးသားသော အမှားလို့ ကောက်ချက်ချဖို့ ခက်တဲ့အမှားပါ။ အချိန်အများကြီး ရှိပါရဲ့ ကပ်ပီး တမင်မှားတယ်တောင် ထင်ရတယ်။ ရလာဒ်တွေအရ ပြင်ပေးမယ် မထင်ပါ။
(၃) အန်အယ်ဒီပါတီက ဘာဖြစ်လို့ မဲစာရင်းတွေကို တစ်အိမ်တက်ဆင်းလိုက် စစ်ပြီး ပြင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေရတာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ?
အန်အယ်ဒီက ထူးလုပ်နေတာ မဟုတ်ပါ။ ကျန်သူတွေက မလုပ်တာပါ။
(၄) အန်အယ်ဒီလိုပဲ ပါတီဝင်အင်အားအများအပြားရှိနေတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကရော ဘာဖြစ်လို့ မဲစာရင်းတွေကို လိုက်စစ်ဖို့ မကြိုးပမ်းတာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ကိုယ်ခိုးဖို့ ဖောက်တဲ့အဖောက် ကိုယ်ပြန်ပိတ်တဲ့ သူခိုး မမြင်ဘူးပါ။
(၅) ပြည်သူတွေကရော မဲစာရင်းတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ထင်ပါသလား?
ပြည်သူတွေကို စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်ခဲ့သလားပဲ ပြန်မေးချင်ပါတယ်။ လက်ဝှေ့မှာ တကယ်ထိုးမယ့် လက်သီးကို ခပ်ကွယ်ကွယ်လုပ်ပီး ကျန်တဲ့ လက်စီးနဲ့ ဟိုခြောက်ဒီခြောက် လုပ်နေတာ မြင်ဖူးကြမှာပါ။ လက်ဝှေ့မထိုးဘူးတဲ့ ပြည်သူဆိုရင် ရှေ့လက်သီးတွေ လိုက်ကြည့်ရတာ မောလှပေါ့။
(၆)မှားနေတဲ့ ဒီမဲစာရင်းတွေကို အမှန်ဖြစ်သွားအောင် မပြင်ဘဲ ဒီအမှားကြီးနဲ့ပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရင် ဘာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
မဲစာရင်းတစ်ခုပဲ အရေးကြီးတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ ကြိုတင်မဲ၊ ပယ်မဲ၊ ခိုးမဲတွေပါ သတိထားရဦးမယ်။ဘက်ပေါင်းစုံညစ်လိုက်ရင် ပြည်သူလိုချင်တဲ့အဖြေ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်။
(၇) မှားနေတဲ့ မဲစာရင်းနဲ့ အန်အယ်ဒီပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မယ် ထင်ပါသလဲ?
မဲစာရင်းက အဓိက မဟုတ်ဘူး။ ကော်မရှင်က အဓိက။ မဲစာရင်းမှန်လည်း ညစ်မယ့်သူတွေ ရှိသေးရင် မထူးပါ။
(၈)မဲစာရင်းတွေ အချိန်မီ မပြင်နိုင်ခဲ့ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ် ထင်ပါသလား?
(၉)တကယ်လို့ မဲစာရင်းပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်ယူရမယ်ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ရွေ့ဆိုင်းလိုက်ရင် ဘယ်သူတွေအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိပြီး ဘယ်သူတွေကတော့ ထိခိုက်နစ်နာသွားကြမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ဂိုးအများကြီးရထားတဲ့အသင်းက ပွဲကို မြန်မြန်ပီးစေချင်မှာပါပဲ။ လုပ်မယ်မထင်ပါ
မဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ ..ဘာသံမှကို မကြားရ…
ရွေးဂေါက်ပွဲ ကော ်မရှင် အုတ်ကဌ အူးတင်အေး တူမ ဇီဇီခင်ဇော ်
ဒီနေ့မဲစာရင်းသွားကြည့်မှပဲ ကိုယ့်အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားကို လက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။
ဒီမှာလဲ မေးလိုက်ပြီး အချက်အလက်ရဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ်။
မျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါဇီ။ :-)))
လူတွေလဲ မဲပေးသာပေး ခဏခဏ အညစ်ခံရတော့ မဲထည့်ဖို့တောင်
မပေးးပဲ မနေပါနဲ့ ဒေါ်လေးးရယ်
သူတို့ အကြိုက် ဝင်သွားးမှာပေါ့
ကို သာ ပို
သံရုံးမှာပေးတဲ့ ကြိုတင်မဲတွေကို စိတ်မချရဘူး အပြောများကြတယ်…
မယုံကြည်ဘူးပေါ့လေ… ကာကွယ်ပြောရအောင် ကိုယ်တိုင်က ရွေးကော်က မဟုတ်သလို သံရုံးကလဲ မဟုတ်ပါဘူး… မျက်စေ့စုံမှိတ် မယုံကြည်ဘူး… ပြောတာထက်စာရင် နည်းဥပဒေမှာပါတဲ့ လမ်းကြောင်းလေးကို အရင်လေ့လာပြီးမှ ပြောစေချင်ပါတယ်… ဝေဖန်ရာမှာ ပြီးပြည့်စုံပြီး ထိရောက်စေချင်လို့ပါ…
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က မဲပေးရမယ့် ရက်ကိုကြေညာတဲ့အခါ ပုံစံ ၁၅ ကို သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးတွေမှာ ဖြည့်သွင်းပေးရမှာပါ… အဲ့ဒိ ပုံစံ ၁၅ ကို သံရုံးက စုစည်းပြီးတော့ >>> နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန >>> ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် >>> အဲဒိကနေတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ပို့ပေးရပါမယ်…
မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပုံစံ ၁၅ မှာပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပုံစံ ၁ မှာ ရေးဖြည့်ပြီးတော့ မြို့နယ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပါတီအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေရဲ့ အမည်တွေပါတဲ့ ကြိုတင်မဲစာရွက်နဲ့ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တံဆိပ်တုံးနဲ့ ထုတ်ပေးသူရဲ့ လက်မှတ်တွေပါတဲ့ မဲစာအိတ်တွေ အတိအကျ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ပို့ရမှာပါ…
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကနေ နိုင်ငံအလိုက် စီစစ်စုစည်းပြီး >>> နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ကြားခံပြီးတော့ >>> သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးတွေကို ပို့ပေးရမှာပါ… သံရုံးတွေကို ကြိုတင်မဲနဲ့ စာအိတ်တွေ ရောက်တဲ့အခါ ပုံစံ ၁၅ ဖြည့်ထားသူတွေကို သံရုံးကနေ အချိန်နေရာ စီစဉ်ပြီးတော့ ကြိုတင်မဲ ပေးစေရမှာပါ… အဲ့ဒိမဲတွေကို ပါလာတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စာအိတ်တွေထဲ ပြန်ထည့်ပြီးတော့ သံရုံးတွေကနေ >>> နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ကနေတဆင့် >> ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ပြန်ပို့ရပါမယ်…
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကနေ စာအိတ်တွေကို ကြည့်ပြီးတော့ မြို့နယ်အလိုက် ပြန်လည်ခွဲခြား စီစစ်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တွေကို ပြန်ပို့ပေးရမှာပါ… ဒီနေရာမှာ ပြန်ရောက်လာတဲ့ ကြိုတင်မဲ အရေအတွက်ဟာ ကြိုတင်မဲစာရွက်နဲ့ စာအိတ်တွေ ထုတ်ပေးချိန်တုန်းက ရေးမှတ်ထားတဲ့ ပုံစံ ၁ နဲ့ ကိုက်ရမှာပါ…
ကြိုတင်မဲ စာရွက်နဲ့ စာအိတ်တွေကို ထုတ်ဝေကတည်းက ပုံစံ ၁၅ အရ အတိအကျ ထုတ်ပေးသူ လက်မှတ်တွေ… ထုတ်ပေးတဲ့ မြို့နယ်နာမည်တွေနဲ့ ပေးလိုက်တာမို့ အတိအကျ စာရင်ဇယားနဲ့ လုပ်ကြရမှာပါ… ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ ကြိုတင်မဲကို ပြင်ဆင်တာ မလုပ်နိုင်ပါဘူး… ပယ်မဲဖြစ်အောင် ဖျက်ဆီးလို့တော့ ရနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်…
တစ်ချို့လွဲနေတာ တစ်ခုက မဲတွေကို သံရုံးတွေက မြန်မာပြည် ပြန်ပို့တာမို့ အယုံအကြည် မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်… လူတစ်ယောက်ချင်းစီ နေထိုင်ရာ မြို့နယ် သို့မဟုတ် မဲဆန္ဒနယ် မတူတာမို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မဲပေးရွေးချယ်ရတဲ့ ပါတီအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး…
ထောက်ခံသလား ကန့်ကွက်သလား နှစ်ခုတည်းမေးတဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲ မဟုတ်တာမို့ ကြိုတင်မဲတိုင်းမဲတိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ် မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွေဆီ မဲပေးတဲ့ ရက်မတိုင်ခင် ပြန်ရောက်ပြီး အခြားမဲတွေနဲ့အတူ ရေတွက်ရမှာပါ…
ကျွန်တော် အခုပြောသွားတာတွေက နည်းဥပဒေမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြိုတင်မဲစာရင်း ပြုလုပ်ပုံ မဲစာရွက်နဲ့ မဲစာအိတ် ထုတ်ပေးပုံ… ကြိုတင်မဲ ပေးပုံတွေကို အရှင်းအလင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ရေးထားတာပါ… မယုံကြည်ဘူး… မလုပ်ဘူး ဘာညာမပြောခင် သေချာအောင် ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်…
ကြိုတင်မဲပေးရတဲ့ အဆင့်ဆင့်မှာ ကိုင်တွယ်တဲ့ သံရုံးအပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် အဆင့်ဆင့်ရဲ့ သူတွေရဲ့ အရည်အချင်း ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် အများဆုံး ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်မဲဟာ ပယ်မဲအထိပဲ နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ကိုယ်မထောက်ခံတဲ့ ပါတီက ကိုယ်စားလှယ် လောင်းအတွက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…
“” မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိပြီးတော့ မဲပေးခဲ့ရင် အဆိုးဆုံး အခြေအနေက ပယ်မဲသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… အကယ်၍ မဲပေးနိုင်တဲ့ မဲစာရင်းမှာ ကိုယ့်နာမည်ပါပြီး မဲမပေးပဲ နေမှသာလျှင် ကိုယ့်မဲစာရွက်ဟာ အလွတ်ဖြစ်နေပြီး ကိုယ်မထောက်ခံတဲ့ ပါတီက မဲဆန္ဒရှင်အတွက် ထောက်ခံမဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်…”” ဒါလေးကိုတော့ သတိရှိစေချင်ပါတယ်…
ဒါ့ကြောင့်မို့ လူတိုင်းလူတိုင်း မဲစာရင်း စစ်ကြပါ… မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့သူမှန်သမျှ မဲပေးလို့ ရနိုင်အောင် လုပ်ထားကြပါ… မဲစာရင်းမှာ မပါခဲ့ရင် ပါအောင်လုပ်ပါ…. အချက်အလက် မှားနေခဲ့ရင် မှန်အောင်ပြင်ပါလို့ ဆော်ဩနေရတာပါ… လူတိုင်းကိုယ်စီ ဘယ်ပါတီရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး… ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ထောက်ခံကြပါ… မဲပေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပါ…
ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်အချိန်တွေကို မနည်းဖဲ့ပေးပြီး ဆော်ဩနေတုန်း… ရွေးကော်က ဘယ်သူတွေက ဘယ်အဆင့်က ယုံရပါ့မလား… သံရုံးက လူတွေက လူလိမ်တွေ… မယုံရဘူး… အယုံအကြည် မရှိဘူး… မဲမပေးကြနဲ့ အလကားပဲ လာပြောတာတွေဟာ ရင်ဝကို ဆောင့်ကန်သလို ခံစားရပါတယ်…
မယုံကြည်တာဟာ မယုံကြည်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်… မယုံကြည်ကြောင်း သူများတွေကို မပြောခင်… မယုံကြည်သင့်ကြောင်း မဆွယ်ခင်လေးမှာ အချက်အလက် အခြေအနေ သတင်အချက်အလက် အစုံကိုတော့ သိကြဖို့ ကြိုးစားစေလိုပါတယ်…
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဇွန်လ(၂၇)ရက်။
အကြောင်းအရာ။ ။ မဲစာရင်းအမှန်ဖြစ်ရေးကိစ္စ။
၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည့်၊ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များမှာ၊ တပြည်လုံးတွင်ရာခိုင်နှုန်း(၈၀)ကျော်
၂။ (၂၀၁၅)ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြန်မာပြည်ရှေ့ရေးအတွက်၊
၃။ ယခုထုတ်ပြန်ကြေညာထားသောမဲစာရင်းများ၊မှားယွင်းနေခြင်းမှာ သဘောရိုးဖြင့်မဟုတ်ပဲ လူထုထောက်ခံအားပေးမှုအပြည့်အဝရှိနေသောအတိုက်အခံပါတီအနိုင်မရစေရေးအတွက် မရိုးဖြောင့်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တမင်ဖန်တီးထားသည်ဟု ကျွန်တော်အပါအဝင် မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့်နိုင်ငံတကာမှ သံသယကြီးစွာရှိနေပါသည်။
၄။ သို့ပါ၍ လူကြီးမင်း၏သမာသမတ်ကျမှု နှင့် ရိုးသားမှုဖြောင့်မတ်မှုကို အများမြင်သာရန် လည်းကောင်း၊လူကြီးဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အရှက်တရားကိုထောက်ထား၍လည်းကောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းအမှန်ကိုပြန်လည်ထုတ်ပြန်ပေးပါရန်နှင့်၊ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်မဲစာရင်းသွားရောက်စစ်ဆေးရမည့်ကာလကို လုံလောက်သောအချိန်တစ်ခု
၁။ ဦးသိန်းစိန် ၊နိုင်ငံတော်သမ္မတ။
၂။ ဦးရွှေမန်း၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ
ဆရာ ဦးကိုနီ ရဲ့ တင်ပြချက်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်း ပြင်ဆင်၍မရလျှင် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တစ်ရပ်ကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အခြေခံသဘောတရားဆိုင်ရာ နည်းလမ်း (၂) ရပ်ရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ –
(၁) သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်း ပြင်ဆင်ခြင်း (Formal Way) နှင့်
(၂) သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း (Informal Way) ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်း ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပမာပြရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တရပ်ရပ်ကို ပြင်ဆင်လိုလျှင် မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကို အခြေခံဥပဒေ၏ အခန်း (၁၂) (ပုဒ်မ ၄၃၃ မှ ၄၃၆ ထိ) တွင် အတိအကျ ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည်ဖြစ်ရာ သတ်မှတ်ထားသည့် ထိုနည်းလမ်းအတိုင်း ပြင်ဆင်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်း ပြင်ဆင်ခြင်းဟု ဆိုလိုပါသည်။
ယခု သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြရာတွင် ၂၅-၆-၂၀၁၅ နေ့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်အရ မအောင်မြင်ဘဲ ရှုုံးနိမ့်သွားခဲ့သည်ကို အများ သိကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ မဲပေးသည့် ကိန်းဂဏန်းများကို လေ့လာကြည့်ရာ –
– ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေးသည့်ဆန္ဒမဲများကို လေ့လာပါက
– မဲပေးခွင့်ရှိသူ – ၅၈၃ ဦး
– ထောက်ခံမဲပေးသူ – ၃၈၈ ဦး
– ကန့်ကွက်သူ – ၁၉၅ ဦး ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
# ဆန္ဒမဲပေးသည့် အရပ်သားအမတ်အရေအတွက်မှာ (၅၈၃-၁၆၆) ၄၁ရ ဦးဖြစ်ရာ၊ ကန့်ကွက်သူအရပ်သားအမတ်အရေအတွက်မှာ (၄၁၇-၃၈၈) ၂၉ ဦး ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
# တစ်နည်းအားဖြင့် ကန့်ကွက်သူ ၁၉၅ ဦးမှ မှ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၁၆၆ ဦး ကို နုတ်လိုက်ပါက ကန့်ကွက်သူအရပ်သားအမတ် အရေအတွက်မှာ (၁၉၅-၁၆၆) ၂၉ ဦးဖြစ်သည်။
# ကန့်ကွက်သူအရပ်သားအမတ်များအား ရာနှုန်း(%) ဖွဲ့လျှင် ၁၀ဝ ÷ ၄၁ရ x ၂၉ = ၇% ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
# ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရပ်သားအမတ် ၉၃% က ထောက်ခံသည့်တိုင်အောင် ပြင်ဆင်ခွင့်မရကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။
(တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်သူ ၉၃% က ပြင်ဆင်လိုပါလျှက် ပြင်ဆင်ခွင့်မရသည့် သဘောဖြစ်ကြောင်း တွေ့နိုင်ပေသည်။)
အထက်ပါ ကိန်းဂဏန်းများနှင့် အခြေအနေအရပ်ရပ်အရ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သတ်မှတ်နည်းလမ်း (Formal Way) အတိုင်း ပြင်ဆင်၍မဖြစ်နိုင်ဆိုသည့်အချက်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပြည်သူများ လက်တွေ့ကျကျ နားလည်သဘောပေါက်အောင် (၂၅-၆-၂၀၁၅) နေ့က အခိုင်အမာ သက်သေထူပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ရပ်ကို သတ်မှတ်နည်းလမ်း (Formal Way) အတိုင်း ပြင်ဆင်၍ မရနိုင်တော့လျှင် ဒုတိယနည်းလမ်းဖြစ်သော “သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း” ဆိုသည့် (Informal Way) ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုရပါသည်။
သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်း မဟုတ်သော ပြင်ဆင်နည်း (Informal Way) ဆိုသည့် အဓိပ္ဗာယ်မှာ အကျဉ်းအားဖြင့် “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ဖော်ပြသတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းမှအပ အခြားနည်းလမ်း တစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးပြု၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။”
(Informal Way နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့တွင် ၃−၆−၂၀၁၅ ရက်နေ့က IDEA နှင့် နယ်သာလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပါရဂူများပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲတွင် အချိန်များစွာပေး၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အထူးပြုဆွေးနွေးပေးရန် စာရေးသူမှ မေတ္တာရပ်ခံတောင်းဆိုခဲ့သည့်အတွက် အချိန်ပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
“သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်သော ပြင်ဆင်ခြင်း” ဟု ဆိုထားသည့်အတွက် စည်းမဲ့၊ ကမ်းမဲ့၊ ပရမ်းပတာပြင်ဆင်ခြင်းမျိုးဟု အဓိပ္ပာယ်မထွက်ပါ။ တရားဝင်သောနည်းလမ်းတစ်မျိုးပင် ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်နည်းလမ်းဖြင့် အလုပ်မဖြစ်၍ အလုပ်ဖြစ်အောင် အခြားနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်အသုံးပြုသည့် သဘောပင် ဖြစ်ပါသည်။
– အချို့က “သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်းပြင်ဆင်ခြင်း” ကို ဥပဒေကြောင်းအရ ပြင်ဆင်ခြင်း ဟု ဖွင့်ဆိုကြပြီး၊
– “သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း” ကိုမူ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်းဟုလည်း ဆိုကြသည်။
မည်သို့ပင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြစေကာမူ “သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ပြင်ဆင်သည့်နည်း” သည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး ပညာရှင်တို့၏ အတွေးအမြင်အယူအဆကိုလိုက်၍လည်းကောင်း၊ အခြေအနေကို လိုက်၍လည်းကောင်း ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပေသည်။
ပြည်သူများ စဉ်းစားနိုင်ရန် နည်းလမ်းတစ်ရပ်
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာမည့် လွှတ်တော်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အများစုအနေအထားရသည်ဆိုပါစို့ (သို့မဟုတ်) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ၊ ပူးပေါင်း၍ အများစုအနေအထားရသည်ဆိုပါစို့ –
ထိုအခြေနေမျိုးတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် မကြိုးပမ်းတော့ဘဲ
(၁) လွှတ်တော် အမတ်တစ်စုက အရေးကြီး အဆိုတစ်ရပ် တင်မည်။
(၂) ယင်းအဆိုတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများ မညီကြောင်း၊ အကိုးအကားများတင်ပြမည်။
(၃) ထို့နောက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဖြင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ မည်သည့် အခါမျှ ထူထောင်၍မရနိုင်ကြောင်း ပြည်သူတို ့၏ အခွင့်အရေးလည်း အပြည့်အဝမရနိုင်ကြောင်း အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြမည်။
(၄) ထို ့နောက် အထက်ဖေါ်ပြပါ အကြောင်းများကြောင့် အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်၏အကျိုး အလို့ငှာ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ဖွဲ ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ကို ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ ရေးဆွဲအတည်ပြုပြီး၊ ဖွဲ ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ်နှင့်အညီ ရွေးကောက်ပွဲများ ပြန်လည်ကျင်းပ ရွေးကောက်တင်မြှောက်၍ နိုင်ငံတော်အား ဆက်လက်စီမံ အုပ်ချုပ်သွားရန် အရေးကြီးအဆို တင်သွင်းမည်။
(၅) (ဖွဲ ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲနေစဉ်ကာလအတွင်း လက်ရှိဖွဲ ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့် လက်ရှိလွှတ်တော်နှင့် လက်ရှိအစိုးရတို ့က နိုင်ငံအား စီမံအုပ်ချုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဖွဲ ့စည်းပုံအသစ် ရေးဆွဲအတည်ပြုပြီးမှ အစိုးရက လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ ့စည်းကာ လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်သည်။)
(၆) အထက်ဖေါ်ပြပါအဆိုကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် အခြေအတင် ဆွေးနွေးပြီးနောက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မည်။
(၇) အကယ်၍ အများစုထောက်ခံ၍ အဆိုအတည်ဖြစ်လျှင် လွှတ်တော်၏ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပြည်သူ ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်၍ သက်ဆိုင်သူအားလုံးက ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာ အကောင်အထည် ဖေါ်ကြမည်ဆိုလျှင်
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ် တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြေ ရှိ-မရှိ ပြည်သူများစဉ်းစား နိုင်ရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။
(၁) အထက်ဖေါ်ပြပါ စာရေးသူ၏တင်ပြချက်သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ ့ချုပ်၏ အယူအဆနှင့် မူဝါဒ မဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂလအမြင်သာဖြစ်ကြောင်း နှင့် ပြည်သူအများစဉ်းစာနိုင်ရန် “ သတ်မှတ်နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း” အတွက် ဥပမာသဘော တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ စာရေးသူ၏ တင်ပြချက်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခြားနည်းလမ်းများစွာ ရှိနိုင်ပါကြောင်းကိုလည်း ကြိုတင်၍ဝန်ခံပါသည်။
(၂) စာရေးသူ၏ ဤဆောင်းပါးကို စိတ်ဝင်စားသည့် ဂျာနယ်သတင်းစာများ အနေဖြင့်ကူးယူဖော်ပြ နိုင်ပါသည်။
ကျုပ်လည်းဒီလသတင်းစာထဲမှာကို… ယူအက်စ်-အနောက်ဖက်ကမ်းပြည်နယ်များနေမြန်မာပြည်သားများအတွက်.. သံရုံးကြော်ငြာစာ သတင်းနဲ့ လင်ခ့်ထည့်ပေးထားတယ်..။
LA မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ ဇွန်လ၉ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တခုထုတ်ပြန်သည်။
ကြေညာချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၅အောက်တိုဘာလကုန်(သို့)နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုငိး၌ အထွေထွေရွေး
ကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်သွားရန်ရှိပါကြောင်း၊အမေရိကပြည်ထောင်စုရောက် အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူများကိုစာရင်းပြုစုလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိသူတိုင်းမဲပေးနိုင်ရေးအတွက်အသက်၁၈နှစ်ပြည်ပြီး
သူမြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသို့ဆက်သွယ်လျှက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း၊ စာရင်းပေးသွင်းလိုသူများ ပုံစံဖေါင်ကိုဖြည့်စွက်လျှက် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသို့ စာတိုက်၊ ဖက်စ်၊ အီးမေးလ် တို့ဖြင့်အကြောင်းကြားနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။အဆိုပါဖေါင်ကို အလွယ်တကူDownload လုပ်နိုင်ရန် မြန်မာ့
ဂဇက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ပေးထားပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ Link မှတဆင့် ရယူနိုင်ပါကြောင်း..။
မဲစာရင်း စိစစ်ရေး လမ်းညွှန်ပါ။
Credit to Dr. Tint Swe
How to vote ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဘာကိုရွေးတာလည်း
မြန်မာပြည်ကရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်မယ့်သူကို ရွေးပေးရတာမဟုတ်ပါ။ အုပ်ချုပ်မယ့်အစိုးရကိုလည်း ရွေးပေးရတာမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်စားလှယ်ကိုသာ မဲပေးခွင့်ရှိတယ်။ အဲတာတောင်မှ မဟုတ်ချင်တော့လို့ အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာ (ပီအာ) ဆိုတာ ထွင်လာတယ်။ ကြိုက်တဲ့လူကို ရွေးခွင်မရှိတဲ့စနစ်သာဖြစ်တယ်။ ခုထိသေချာသေးတာက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကို မဲပေးခွင့်ကလေး ရနေသေးတာပါ။ အဲဒါကြောင့် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီကိုသာ ကြည့်ပြီး မဲပေးကြပါ။
လွှတ်တော်နေရာ ပေါင်း(၂၂၄ + ၄၄ဝ = ၆၆၄) ထဲက (၅၆) နဲ့ (၁၁ဝ) ယောက်ကို လူတွေကရွေးခွင့်မရှိပါ။ (၁၂၄) နဲ့ (၂၁၂) နေရာတွေကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးကအနိုင်ယူထားတယ်။ ကျန်ပါတီတွေက (၄၄) နေရာနဲ့ (၁ဝ၉) နေရာမှာသာရကြတယ်။ NLD ပါတီက (၄) နေရာနဲ့ (၃၈) နေရာသာရထားတယ်။
သမ္မတကို လူထုကတိုက်ရိုက်ရွေးခွင့်မရှိပါ။ သမတကသာ လူထုကိုကြိုက်သလိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ သမတရွေးချယ် တင်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကနေသာ သမတကိုရွေးတယ်။ အဲတာထဲမှာ အစု (၃) စုရှိတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေကအမတ်တွေကတစု၊ မြို့နယ်အခြေခံ မဲဆန္ဒနယ်မြေကတက်လာတဲ့ အမတ်တွေကတစုနဲ့ စစ်တပ်ဦးစီးကအမိန့်ပေးထားတဲ့ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတစုဖြစ်တယ်။ အစုတစုကနေ နာမည်တခုစီအဆိုပြုမယ်။ အဲဒီ (၃) ဦးကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေမဲပေးပြီး မဲအများဆုံးလူကို သမတ၊ ကျန် (၂) ဦးကို ဒုသမတတွေအဖြစ် ရွေးတယ်။ သမတကနေသာ အစိုးရအဖွဲ့ကို ရွေးချယ်ခန့်ထားတယ်။ လူထုနဲ့အစိုးရ ဆက်စပ်မှုမရှိဘူး။
အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်သူတွေက (၃) ပုံထဲ (၁) လောက်အတွက်သာ အားခဲရမလိုဖြစ်တယ်။ NLD ပါတီက လွှတ်တော် ၂ ရပ်လုံးမှာ နေရာအများစုရပါမှ သမတအမည်တင်ခွင့်မှာ တပမ်းသာမယ်။ (၁) ခုထဲမှာသာ အများစုရရင်လည်း (၃) မဲ (၁) မဲနဲ့ သမတတင်မယ့်သူ ရှုံးမယ်။ အဲတာကြောင့် အထက်လွှတ်တော်မှာ (ပီအာ) လုပ်လာတာ ဖြစ်တယ်။
NLD ကို မုန်းတီးစိတ်နဲ့ကြည့်၊ အခွင့်အရေးလောဘလည်းရှိတဲ့ အမတ်တချို့က (ပီအာ) အတွက် အာနေကြတာဖြစ်တယ်။ အဲတာကြောင့် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဲလိုအမတ်လောင်းနဲ့ အဲဒီပါတီမျိုးတွေကိုလည်း မဲမပေးပါနဲ့။
လူမျိုးစုအခြေပြု ပါတီတွေကလည်း အာဏာရှင်တွေဖက်မှာနေမှာလား။ NLD နဲ့နေမှာလား။ သီးခြားနေလို့တော့ ပညာရှိရာမကျပါ။
NLD နေရာအပြတ်အသတ်မရလို့ မဲပြားသွားရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးကပဲဆက်စားနေအုံးမယ်။ အဲတာကြောင့် အမတ်လောင်းကို ကြည့်မနေကြပဲ NLD ပါတီကိုသာမဲတွေပုံအောကြမှသာ ဗျူဟာမြောက်တဲ့မဲပေးတဲ့သူဖြစ်ပါမယ်။
လန်ဒန်မြန်မာ သံရုံး က Form 15 တင်လို့ ရပြီလို့ သတင်းရပါပြီ။
တာဝန်ကျေလို သူ များ ဆက်သွယ်ပြီး အနာဂါတ် မြန်မာပြည် တည်ဆောက်ရေးအတွက် သဲတစ်ပွင့် အဖြစ် ပါစေလို ပါတယ်။
. ပြသနာ က ရန်ကုန် မှာ မဲစာရင်းထဲ မပါတော့ ပြန်လျှောက်ခိုင်းထားတာ ဘယ်တော့ ပြန်ကျ မယ် မသိ။